Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Raadadka Amniga ayaa ku daraya kooxda fulinta
SecurityTrails, Isugeynta Tixraaca Internetka, ayaa ku daraya kooxdeeda fulinta iyaga oo keenay Scott Donnelly oo ah Madaxweyne Kuxigeenka Iibka iyo Taylor Dondich oo ah Sarkaalka Sare ee Tiknoolajiyadda. Xubnaha kooxda muddada dheer Courtney Couch iyo Kris Lopez waxay qaataan doorar cusub si ay u soo koobaan kooxda.
“Taylor iyo Scott waxay ku biirayaan waqtiga ugu habboon ee loogu talagalay SecurityTrails. Markii aan soo saarnay badeecadeena Dhimista Dhulka Weerarada, waxaan u qaadaynaa caqabado waaweyn ururada waaweyn. Khibradooda ayaa gacan ka geysan doonta hubinta in SecurityTrails iyo macaamiisheeda labadaba ay guuleystaan. ” - Chris Ueland, Maamulaha Guud ee SecurityTrails.
Scott Donnelly wuxuu keenaa aqoon badan oo warshadaha ah, isagoo qabtay kaalin hoggaamineed oo iib oo sarsare Expanse iyo Future Recorded. Intii uu ahaa Madaxweyne ku -xigeenka Xalka Farsamada ee Mustaqbalka Diiwaangashan, Scott wuxuu waday is -dhexgalka sirdoonkooda amniga oo ay la socdeen daraasiin IT -da iyo alaabooyinka amniga hogaaminaya. Imaanshihiisa SecurityTrails wuxuu hubin doonaa in macaamiishu ay gartaan qiimaha Isugeynta Tirakoobka Internetka ee ururkooda oo dhan.
Taylor Dondich ayaa la wareegaya xilka Sarkaalka Sare ee Farsamada. Co-Founder Courtney Couch ayaa hadda diiradda saari doonta sidii loo heli lahaa habab wanaagsan oo lagu garto kaabayaasha macmiilka iyo halista kaalintiisa cusub ee ah Sarkaalka Hal-abuurka Sare.
Dondich wuxuu ka soo shaqeeyey booska teknolojiyadda muddo ka badan labaatan sano shirkado ay ka mid yihiin Yahoo iyo Splunk, iyo sidoo kale VP of Engineering for MaxCDN. Khibradiisa ku aaddan doorka fulinta farsamada, la -taliyaha iyo injineerka ayaa hagi doona SecurityTrails si loo horumariyo tiknolojiyadda hal -abuurka ah iyo in la hubiyo in macaamiisha aysan waligood ka indho -saaban khataraha aan la aqoon.
Iyada oo hore uga soo shaqaysay Maareeyaha Iskaashiga Istiraatiijiga ah ee SecurityTrails, Kris Lopez oo ah sooyaalkeeda ganacsi ee baaxadda leh oo ay weheliso xirfadeeda shaqsiyadeed iyo maareynta mashruuca ayaa ka dhigaysa xulasho dhammaystiran oo ah Madaxa Shaqaalaha cusub.
SecurityTrails waxay soo saareysaa isbeddeladaan aaladda si ay ugu sii gudbiso heerka xiga iyo inay hubiso inay sii wadaan bixinta tayada ugu wanaagsan ee xogta la heli karo si ay uga caawiyaan shirkadaha inay is -difaacaan.